Kartida Wax Soo Saarka - Baakaynta Hal-abuurka BXL
Waxaa la aasaasay 2008, BXL Creative waa mid ka mid ah hormuudka naqshadeynta baakadaha iyo shirkadaha wax soo saarka ee Shiinaha.
Suuqa ugu weyn: Mareykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed, iyo Bariga Dhexe.
Warshadaha ugu muhiimsan: qurxinta, qurxinta/qurxinta, daryeelka maqaarka, cadarka, shumaca ur udgoon, udgoonka guriga, cunto qaali ah / kaabsi, khamri & ruux, dahabka, CBD alaabta, iwm.
Qaybaha badeecadaha kala duwan: sanduuqyada hadiyadaha gacanta lagu daabaco, palette qurxiyo, shandad gacmeed, dhululubo, daasadaha, polyester-ka/bacaha kubaddii, sanduuqyada caagga ah/ dhalooyin, dhalooyin/dharado dhalada ah.Dhammaan Ku Saabsan Baakaynta La Habeeyay.
Heidelberg 4C Mashiinka Daabacaadda
Jarmal Heidelberg CD102 daabacaadda offset-ka ayaa si weyn u kordhisa dabacsanaanta qalabka, iyada oo celcelis ahaan wax soo saarka 100,000 sanduuqyada gacanta lagu sameeyo iyo 200,000 kartoon maalintii, si wax ku ool ah loo hubiyo wax soo saarka baakadaha.
Manroland 7+1 Machine Printing
Si gaar ah loogu talagalay soo saarista daabacado tayo sare leh, gaar ahaan waraaqaha mylar, warqad luul ah iyo noocyo kale oo waraaqo gaar ah oo ay adag tahay in la gaaro waxqabadka midabka sare.Mashiinkan ayaa daboolaya dhammaan.
Aqoon-is-weydaarsi aan boodh lahayn
Si loo sii hubiyo tayada badeecada, warshadu waxay si gaar ah ugu qalabaysan tahay goobo waxbarasho oo aan boodh lahayn.
Tijaabada Kulaylka, Tijaabada Dhibicda, iwm, laga bilaabo xulashada walxaha ilaa habsocodka xakamaynta ilaa baadhista badeecada dhammaatay, tijaabada saadka 108 qanjidhada noodhka si loo hubiyo tayada wanaagsan ee xidhmo kasta.
Safarka VR ee warshadda